मेसिनगन चोरी प्रकरण : ‘मिस लिड’का कारण जेलको बास, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
मेसिनगन चोरी प्रकरण : ‘मिस लिड’का कारण जेलको बास, के हुन्छ अब ?
काठमाडौ। कालीबहादुर गणमा हतियार चोरी प्रकरण : ‘तत्कालीन मेजर श्रेष्ठको ‘मिस लिड’का कारण निर्दोष सैनिक फसे’ ।
सोमनाथ ढुंगाना, अधिवक्ता भन्छन
हतियार चोरी गर्दा प्रयोग गरिएको फलामको हुक र झ्याल काट्न प्रयोग गरिएको करौँती घटनास्थलमै थियो । त्यसमा अभियुक्तको अँगुठा छाप पक्कै थिए । त्यसको सुरक्षा गरिएन । घटनास्थलमा चारवटा सिसिक्यामेरा थिए । त्यसका फुटेज पनि हेरिएन । जसले घटनालाई ‘मिस लिड’ गर्न सघायो र निर्दोष फस्न पुगे ।घटना सार्वजनिक भएपछि सेनाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदन सैनिक विशेष अदालतमा पेस भएको सेनाले जनाएको छ । अदालतमा गएको विषय भएकाले सैनिक अधिकारीहरूले यसमा प्रतिक्रिया दिन हतार हुने बताएका छन् ।